गौतमबुद्ध विमानस्थलका कारण रुपन्देहीमा होटल खोल्ने लहर, रु.४५ अर्ब बढी लगानी Bizshala -
गौतमबुद्ध विमानस्थलका कारण रुपन्देहीमा होटल खोल्ने लहर, रु.४५ अर्ब बढी लगानी
रुपन्देही । प्रदेश नं ५ को राजधानी बुटवल आसपासमा ठूला साना होटल खुल्ने क्रम बढेको छ । पछिल्ला समय बुटबल, भैरहवा तथा आसापासमा साना ठूला गरी १५ सय भन्दा बढी सञ्चालनमा आएका छन् ।
रुपन्देहीमा प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल महामानब गौतमबुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी तथा नेपालकै पहिलो बिशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा आउने बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरुलाई लक्षित गरी रुपन्देहीका होटलमा ४५ अर्बको लगानी गरिएको छ ।
होटल ब्यबसायी संघ बुटबल, तथा सिद्धार्थ होटल ब्यबसायी संघको तथ्यांक अनुसार बुटवलमा १४ सय र भैरहवामा १ सय १६ साना ठूला होटल सञ्चालनमा आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा बुटबलमा ठूला होटलमा लगानी गर्न सुरु गरिएको छ । बुटबलमा अहिले २५ करोडको लगानीमा होटल लक्ष्मी सुरु भएको छ भने होटल एभिन्यु ५० करोडको लगानीमा सुरु भएको छ । रु. १० करोडको लगानीमा काठमाण्डौको एक कलवार समूहले होटल सञ्चालनका लागि निमार्णको काम सुरु गरेको छ । बाहिरबाट आउनेको संख्या समेत बढ्दै गएको छ ।
होटल ब्यवसायी समिति बुटबलका अध्यक्ष समुद्र जीसी भन्छन्–‘लुम्बिनी नजिकै भैरहवामा सुरु भएको देशकै वैकल्पिक अन्तराष्ट्रिय गौतमबुद्ध विमानस्थल, भैरहवामै सुरु भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज लगायत प्रदेश नं ५ को राजधानीका कारण व्यवसायीले होटलमा लगानी बढाएका हुन् ।’
उनले ५ करोडभन्दा साना लगानीकर्ता अत्यधिक रहेको बताएका छन् । बुटबलमा तारे होटल भने अहिलेसम्म नभएको बताए । समितिमा आबद्ध रहेका होटललाई तीन समूहमा बिभाजन गरेको उनको भनाई छ ।
१ करोड भन्दामाथि लगानी गर्नेको संख्या २ सय भन्दा बढी रहेको छ । होटल पार्टिप्यालेस दुबै १ देखी ५० करोड सम्मका रहेका छन् । तिनलाई ए समूहमा राखिएको छ । ए लेबलका होटलमा एसी पार्किङ लगायतका सुबिधा सम्पन्न रहेका छन् ।
त्यस्तै १ करोड भन्दा तल २५ लाखसम्म रहेकालाई बी समूहमा र २५ देखि तल रहेका सबैलाई सी समूहमा राखिएको उनले बताए । ए समूहमा सबै सुबिधा सम्पन्न होटल रहेका छन् । यी होटल स्टार भन्दा कम नरहेका बेलबासेको भनाई छ ।
बुटबल उपमहानगरपालिका तिलोत्तमा, देबदह, सैनामैना तथा गाउँपालिकामा रहेका होटलहरु संघमा आबद्ध रहेको बताए । बुटबलमा ५० भन्दा बढी ठूला आधुनिक होटल थपिएका जीसीको भनाई छ । उनका अनुसार अहिलेका नयाँ होटलमा नयाँ प्रविधि र सेवायुक्त पर्यटनमैत्री होटल बढी छन ।
आधुनिक होटलमा फ्री वाइफाई, ट्रेकिङ पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण प्याकेज, स्विमिङ, सेमिनार हल, मनोरञ्जन हल, खानाका विशेष परिकार, ध्यान योग शिविर, सरसफाइ सवारी साधन, डान्स तथा दोहोरी राखिएको जीसीको भनाई छ । यहाँ खुलेका होटलमा ८ हजार बढी मजदुर कार्यरत रहेका छन् । बुटबलमा दैनीक १० हजारलाई खाना बस्नको सुबिधा रहेको जिसीको भनाई छ ।
उता रुपन्देहीको सदरमुकाम भैरहवामा रहेको सिद्धार्थ होटल ब्यबसायी संघमा १ सय १६ बटा होटल आबद्ध छन् । स्टार होटल नभएको र अहिलेसम्म लुम्बिनी र भैरहवामा गरी २० अर्ब भन्दा बढीको लगानी भएको सिद्धार्थ होटल ब्यबसायी एसोसियसनका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठल बताए ।
होटलमा ५ हजार भन्दा बढीले रोजगारी पाएका र दैनिक ८ हजार भन्दा बढीलाई बस्नखानाको सुबिधा दिनसक्ने क्षमता यहाँका होटलमा छन् ।
सिद्धार्थ होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठका अनुसार लुम्बिनी आउने पर्यटक सबै बस्दैनन्, उनीहरुमध्ये ३० प्रतिशत मात्र होटलमा बस्छन । ५० प्रतिशत र्फकन्छन र २० प्रतिशत गुम्बाहरुमा बस्छन् ।
लुम्बिनी आएका ३ लाख भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायतका पर्यटकलाई भिसा फ्रि बनाईएको कारण उनीहरु आउने जाने गर्दछन । १ लाख ५० हजार युरोपीयनलाई भिसामा बढी राजश्व लिने कारण उनीहरु बस्छन । लुम्बिनीमा यसबर्ष ७ लाख पर्यटक भ्रमण गरेका छन ।
तारे होटल खुल्दै
भैरहवामा २ बटा तारे होटल खुल्ने तयारी रहेको सिद्धार्थ होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार लुम्बिनीमा १ अर्ब २५ करोडको लगानीमा होटल पबन ईन्टरनेशनल सुरु भएको छ छ भने अर्काे नयाँ नेपाल भारतको सिमाबेलहियामा १ अर्ब ५० करोडको लगानीमा दिपप्रकाश स्टार होटल संचालनको तयारी भइरहेको छ । सो होटल निमार्णमा अहिलेसम्म ९० करोड खर्च भइसकेको र निर्माण पूरा भइसक्दासम्म १ अर्ब ५० करोड लगानी लाग्ने बताइएको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोटिहवामा पाँचतारे स्तरको टाइगर प्यालेस रिसोर्टले सेवा सुरु गरिसकेको छ । ५ करोड २० लाखको लगातमा उक्त होटल सुरु भई सेवा दिइरहेको छ ।
लुम्बिनी र आसपासको क्षेत्र अन्तराष्ट्रिय पर्यटन सहर बन्दै जाँदा अन्यत्र होटल व्यवसायमा रमेका व्यवसायी समेत यहाँ आकर्षित भएका बुटबल उद्योग संघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीको भनाई छ ।
एशियन लाइफका प्रडक्ट एक्सेल बैंकले बिक्री गर्ने
झापाको सुरुङ्गामा सिभिल बैंक
शाखारहित सेवामा माछापुच्छ्रे आक्रामक, इकाई संख्या १०० पुग्यो
काठमाण्डौका दुई स्थानमा महालक्ष्मी बैंकद्वारा शाखा स्थापना
आफ्नै रेकर्ड तोड्दै कामीरिताले २३ औं पटक सगरमाथा शिखर चुमे
काठमाण्डौ । साहसिक आरोही कामीरिता शेर्पाले २३औँ पटक विश्वको...
कसको स्वार्थले समस्याग्रस्त बन्दैछ गौतमबुद्ध विमानस्थल ?
आम नेपालीमा उत्साह र भरोसा बढाउने गरी अगाडि बढेको गौतमबुद्ध...
क्याप्टेन विजय लामा निलम्बित, आफ्नै बोली बन्यो गलपासो
काठमाण्डौ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल एयरलाइन्सका...
आन्तरिक एयरपोर्ट धुलिखेलमा बन्ने
काभ्रेपलाञ्चोक । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद...
अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड बन्दै ‘हिमालयन ट्राभल मार्ट’ जेठमा
काठमाण्डौ । नेपाली पर्यटन क्षेत्रकै ठूलो मेलाका रुपमा लिइने...
'चिया नखाई पहरा दिंदै थिए, जहाजले किच्दा क्षणभरमै देह उड्यो !'
सोलुखुम्बु । नयाँ वर्ष २०७६ को पहिलो दिन वैशाख १ गते बिहानैदेखि...